Iskuuladii Koonfur Afrika oo dib loo furay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Iskuuladii Koonfur Afrika oo dib loo furay
Iskuuladii Koonfur Afrika oo dib loo furay
Caruurta ku nool Koonfur Afrika ayaa bilaabay inay ku noqdaan fasalada Isniinta iyadoo qayb ka ah si tartiib tartiib ah loo sii deynayo xayiraadaha lagu soo rogay xayiraad muddo-bilood qaadatay oo COVID-19 ah.
Dib u furitaanka iskuulada ayaa dib loo dhigay kadib markii ururada shaqaalaha macalimiinta ay ku booriyeen shaqaalaha iskuulka in ay jebiyaan amarka dowlada usbuucii la soo dhaafay, iyaga oo sheegay in iskuulada aysan laheyn talaabooyin kufilan oo xagga caafimaadka iyo nadaafada ah si ay macalimiinta iyo ardayda u ilaashadaan.
Koonfur Afrika ayaa tirisay ku dhawaad ​​50,000 kiis oo ah cudurka cusub ee coronavirus – oo ah kan ugu badan dal kasta oo ka hooseeya Sahara Afrika – oo ay ku jiraan ku dhawaad ​​1,000 dhimasho.
Wasiirka waxbarashada aasaasiga ah Angie Motshekga ayaa Axadii sheegtay in sare u qaadista dadaallada lagu qalabeeynayo iskuullada usbuucii la soo dhaafay ay ka dhigan tahay in 95% iskuulada hoose iyo kuwa sare ee South Africa ay hada awood u leeyihiin in ay qabtaan casharo.
Motshekga ayaa yidhi: “Sharciga dahabsiga ah ma jiri doono iskuul dib u bilaabi doona hadaanu diyaar ahayn.”
Dowladdu waxay heli doontaa qabanqaabooyin kale oo loogu talagalay ardayda dhigata iskuullada aan furin Isniinta, ayay tidhi.
Bilowgiiba, kaliya ardayda dhigata fasalada 7 iyo 12 ayaa fasalka ku soo laaban doona, iyada oo sanadaha kale ay si tartiib tartiib ah usocdaan.
In badan oo ka mid ah iskuulada dawlada ee Koonfur Afrika waxay ku sugan yihiin xaalad liidata, gaar ahaan meelaha baadiyaha ah, falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in rubuc ka mid ah aysan haysan biyo socda, taas oo ka dhigaysa gacmo-dhaqashada inay u badan tahay wax aan macquul ahayn.
Kuwo kale ayaa loo hanjabay ama ku dhacay weerarada dab-damiska intii lagu jiray xiritaankii qaranka oo dhan oo ay xukuntay bishii Maarso.
Saraakiisha dawladda, si kastaba ha noqotee, waxay ka walwalaan dib-u-dhac ku yimaadda ku laabashada fasallada waxay ka dhigan tahay in jiil ka mid ah carruurta dugsiga ay halis ugu jiraan inay waayaan qayb muhiim ah oo waxbarashadooda ah, iyo fursadaha mustaqbalka ee ay keenayaan.
Xiritaanku wuxuu daaha ka rogay kala qaybsanaan qoto dheer – oo u dhaxeysa madow iyo caddaan, taajir iyo faqiir ah – oo ku sii nagaaday nidaamka waxbarashada ee Koonfur Afrika rubuc qarni kadib markay dhammaatay xukunkii caddaanka laga tirada badan yahay.
Baarlamaanka Jaban oo lagu tilmaamay waxaan lagu tilmaamin Barlamaanada aduuunka
Wasiiru Dowlaha iyo Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada JFS oo la kulmay...